कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन प्रदेश १ का जिसस प्रमुखहरुको माग – Pradesh Network
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा समन्वय समितिका प्रमुखहरुले क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुको अनिवार्य आरडिटी गर्नुपर्ने बताएका छन् । १४ दिने क्वारेन्टाईन अवधि सकिन लागेको भन्दै आरडिटीको दायरा बढाउन उनीहरुको माग छ ।
क्वारेन्टाईनमा बसेकाको संख्याको आधारमा किट पठाउन समन्वय समिति प्रमुखहरुले माग गरेका छन् । इलामका प्रमुख गणेश बरालले जिल्लामा आरडिटी किट अभाव भएको बताउनुभयो । आरडिटी किट अभावका कारण क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुको परीक्षण गर्न नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
इलाममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको पनि अभाव भएको प्रमुख बरालले बताउनुभयो । झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले आरडिटी किटको अभावमा परीक्षण गर्न नसकीएको बताउनुभयो । झापामा भारत लगायतका विभिन्न देशहरुबाट ९ सय प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । बाहिरीदेशबाट आएकाहरु अधिकांश होमक्वारेन्टाईनमा रहेकाले उनीहरुको आरडिटी अनिवार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आवस्यक किटको अभावमा परीक्षण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । बोर्डरको सुरक्षामा कडाई गरिएको जिसस प्रमुख पोर्तेलले बताउनुभयो । तेर्हथुमका प्रमुख शिव ढुंगानाले बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राख्ने गरिएको बताउनुभयो । क्वारेन्टाईनमा राख्न थालिएपछि बाहिरी जिल्लाबाट आउने घटेको उहाँले बताउनुभयो । तेर्हथुममा ३ सय ७४ को आरडिटी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आरडिटी गरिएका सवैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उहाँले बताउनुभयो । सुनसरीका प्रमुख गोपालराज भण्डारीले जिल्लामा आरडिटी किटको अभाव रहेको बताउनुभयो । आवस्यक किट नहुँदा क्वारेन्टाईनमा राखेकाहरुको परीक्षण गर्न नसकीएको उहाँले बताउनुभयो । सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च सर्तकता अपनाईएको जिसस प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो ।
ओखलढुङ्गाका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले काठमाण्डौं र बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्नेहरुको अनिवार्य आरडिटी गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले सम्म २ सय ३१ जनाको परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण गरिएका सवैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरले हरेक जिल्लालाई दोश्रो चरणमा ३ सय ६० का दरले किट पठाईसकिएको बताउनुभयो । प्
रकोप भएका जिल्लामा आवस्यकताका आधारमा थप किट पठाईने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री घिमिरेले १४ वटै जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई शंकास्पद व्यक्तिको स्वाव संकलन गर्ने संवन्धिको तालिम दिईसकीएको बताउनुभयो । काठमाण्डौं लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाईनमा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री घिमिरेले घडी हेरेर लकडाउन नखुल्ने भएकाले अंश अंशका रुपमा खोलिने बताउनुभयो । वडा, पालिका, जिल्ला गर्दै लकडाउन खुल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विराटनगर, १९ जेठ । प्रदेश नं. १ बाट कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का शंकास्पद तीनसय बढीको स्वाव परीक्षण हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि थप ल्याव सञ्चालन गरेसँगै दैनिक ३ सय बढीको परीक्षण गर्न सकिने भएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणको मात्रा बढाउँदै लगेको उहाँले बताउनुभयो […]
सुनसरीको धरानमा औषधि वितरण
धरान, २५ चैत । १५ दिन देखिको लकडाउनका कारण नियमित औषधि प्रयोग गर्नेहरु समस्यामा परेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरी सुनसरीको धरानमा औषधि वितरण गरिएको छ । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मा रहेका उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड, दम, क्यान्सर र मुटुका विरामीलाई लक्षित गरी औषधी वितरण गरिएको हो । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ […]
विराटनगर, ८ वैशाख । प्रदेश नं. १ मा पीसीआर र आरडिटी विधिबाट ३ हजार २ सय बढीको परीक्षण गरिएको छ । आज साँझ सम्म दुवै विधिबाट ३ हजार २ सय ६८ जनाको परीक्षण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का शंकास्पद ६ सय ५९ जनाको नमूना संकलन गरिएको छ […]